Ụgbọ elu Middle East na-aghọ Airbus Skywise Health Monitoring ọhụrụ ahịa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu Middle East na-aghọ Airbus Skywise Health Monitoring ọhụrụ ahịa
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Lebanon • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ụgbọ elu Middle East na-aghọ Airbus Skywise Health Monitoring ọhụrụ ahịa.
N'iji igwe data ụgbọ elu Skywise, SHM na-achịkọta ma na-edozi ọkwa, mmetụta ụgbọ elu, ozi mmezi wdg, na-ebute ha ụzọ, na-ejikọta mmejọ ọ bụla na usoro nchọpụta nsogbu dị mkpa.
Ụgbọ elu Middle East ga-eji ngwọta maka ụgbọ mmiri ya niile.
Ụgbọ elu nke dabeere na Beirut na-arụ ụgbọ elu Airbus nke nwere ụgbọ elu A320 na A330 Family.
Airbus'SHM na-echekwa oge ụgbọ elu yana ọnụ ahịa metụtara mmezi na-akwadoghị.
Middle East Airlines (MEA) ebinyela aka n'akwụkwọ nkwekọrịta isonye na obodo ndị ọrụ Skywise Health Monitoring (SHM).
Ogologo ogologo Airbus ndị ahịa ga-abụ ụgbọ elu 50th na-eji ngwá ọrụ ọhụrụ a na-ebuli nlekọta nke ụgbọ elu ya. SHM ga-akwado ndị ọrụ ụgbọ elu na-arụ ọrụ na injinia site n'ịkwado njikwa oge nke ihe omume ụgbọ elu na nchọpụta nsogbu.
N'iji igwe data ụgbọ elu Skywise, SHM na-achịkọta ma na-ahazi ọkwa, mmetụta ụgbọ elu, ozi mmezi wdg, na-ebute ha ụzọ, na-ejikọta mmejọ ọ bụla na usoro nchọpụta nsogbu dị mkpa. Ọ na-egosipụtakwa mmetụta arụmọrụ, na-enye akụkọ ihe mere eme nke sistemu (site na ndekọ ndekọ na ozi MIS anakọtara site na Skywise Core ma chekwaa ya na ọdọ data), na-enye ohere nleba anya nke ọma. Na mgbakwunye, ọ nwere ike inyere ndị ụgbọ elu aka ịtụ anya na ịnye ngwaọrụ na akụkụ 'dị nso ụgbọ elu ahụ.
MEA ga-eji ngwọta maka ụgbọ mmiri ya dum. Ụgbọ elu nke Beirut na-arụ ọrụ niile.Airbus ụgbọ elu nke nwere ụgbọ elu ezinụlọ A320 na A330.
Airbus'SHM na-echekwa oge ụgbọ elu yana ọnụ ahịa metụtara mmezi na-akwadoghị. SHM nwekwara Interfaces na Skywise Predictive Maintenance (SPM) na Skywise Reliability (SR) iji nye ahụmịhe onye ọrụ agbakwunyere. Na mgbakwunye, ọ dịla njikere ijikwa ike dị ike nke ụgbọ elu ụgbọ elu ọhụrụ na onye na-ahụ maka nchekwa data rawụta (“FOMAX”) - nke nwere ike weghara ma dekọọ paramita ụgbọ elu 24,000 ozugbo maka nyocha na-esote.
Smith Oliver ekwu, sị:
Ọnwa Iri na Abụọ 9, 2021 na 07:10
Iji data dị adị, mkpesa helpdesk na metrik na-enye gị ohere ịlele mmetụta ndị ahịa na-enwe maka oche enyemaka gị. Mkpesa na-ewepụta akụkọ ahaziri ahazi iji nyere gị aka ịlele na melite arụmọrụ. Onye ndụmọdụ Freshworks na https://www.techloyce.com/freshworks-integrations/ nwere ike inyere gị aka ịhazi usoro ọrụ gị, ọnụ ụzọ ndị ahịa, na ọrụ onye nnọchi anya iji gboo mkpa ụlọ ọrụ gị akọwapụtara.